Malunga nathi -Wilk International Trade (Weifang) Co., Ltd.
IWilk International Trade (Weifang) Co., Ltd.lishishini elibanzi elidibanisa uphando lwezenzululwazi, imveliso kunye nentengiso. Ime kwisiXeko saseLaizhou, kwiPhondo laseShandong, isiseko semveliso esikhulu soomatshini bokwakha, oomatshini bokwakha kunye noomatshini bezolimo kweli lizwe. Eyona mveliso iphambili: Iivili eziThatha iiVili, izinto zokumba, Abaxhasi beKhonkrithi bokuZilayisha, iivili ezi-4 zokuqhuba ivili lokuqhuba, iBackhoe Loader kunye nabanye oomatshini abancinci bokwakha. Okwangoku, eli shishini ligubungela ngaphezulu kwamazwe angama-60 kunye nemimandla kubandakanya iJapan, uMzantsi Korea, iBrazil, iMexico, iDubai, iOstreliya, uMzantsi Afrika kunye noMbindi Mpuma, i-Asia eseMbindi, i-mpuma ye-Asia, kunye ne-European Union.
Inkampani yethu ikakhulu ivelisa izinto zokufaka, ukumbiwa kwezinto, ukuZilayisha iiKhonkrithi zokuHamba, ii-4 ivili lokuqhuba ifreyim yeelori njl.njl.
Inkampani yamkela itekhnoloji yaseJamani ukuvelisa, ukuqokelela amava, kunye nokudibanisa ukuphucuka okuqhubekayo kulwazi lwengxelo olusetyenziswa ngabasebenzisi abavela kwihlabathi liphela, ngokujonga ngokupheleleyo iimfuno zabasebenzisi, kwaye ngokuthe ngcembe iseka inkqubo yolawulo lwemveliso yolawulo esemgangathweni engqongqo. ngokugqibeleleyo, ngokukhawuleza kwaye ngexesha elifanelekileyo emva kokuthengisa iinxalenye zonikezelo lwenkonzo. Ngokwemodeli yophuhliso lweshishini, iyahambelana nenkqubela phambili ye-e-commerce, kwaye iphonononga indlela entsha ye "Intanethi + yokuvelisa ngokwesiko" efanelekileyo kuphuhliso lwayo.
Umgangatho kunye nokusebenza kwamavili ethu okulayisha kunye ne-4 yevili lokuqhuba iilori ze-forklift zikwisikhundla esiphambili seshishini kwilizwe liphela kwaye samkelwe kakuhle ngabasebenzisi. Ngoku, "WIK" uphawu lwevili elilayisha umthwalo kunye neZinto eziLinganayo zeKhonkrithi eziHlanganisiweyo zifumene ukwamkelwa ngabathengisi kwaye zisebenzisa iChina iphela.
Sigxila kumgangatho, ukusebenza kunye nokuqwalaselwa kwabasebenzisi njengamaxesha onke. Kulawulo, siphumelele kwinqanaba elitsha ngokwamkela ISO9001: 2000 inkqubo yolawulo lomgangatho ngamazwe.
Ifilosofi yenkampani yile: ukufuna inyani kunye nokuyila, ukufuna ukusinda ngomgangatho, ukufuna ukukhula ngobugcisa, ukufuna isiqinisekiso ngenkonzo elungileyo negqibeleleyo, ukugqwesa thina, nokuzabalazela ukwenza uphawu lwelizwe jikelele. Kwaye i-R & D engapheliyo kunye nezinto ezintsha. Ukwenza iimveliso zokhuphiswano kunye neenkonzo kubathengi bethu.